Fandrarana Vape Wholesale any Etazonia sy Manerantany ary orinasa mpamokatra | SMOORE
Ny fiheverana ofisialy ny fampiasana vaping sy nikôtin amin'ny ankapobeny dia miovaova be. Any amin'ny Fanjakana Mitambatra, ny vaping dia ampirisihin'ny masoivohon'ny fahasalamana ho an'ny governemanta. Satria ny fifohana sigara dia miteraka enta-mavesatra lehibe ho an'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana Nasionaly any Angletera, mijoro ny firenena mba hitsitsiana vola raha mifoka sigara e-sigara kosa ireo mpifoka.
Ny ankamaroan'ny firenena hafa dia mamela tsena vaping voafehy ihany koa, saingy tsy dia nafana fo amin'ny fanohanan'izy ireo ilay fomba fanao. Any Etazonia, ny FDA dia manana fahefana amin'ny vokatra etona, saingy nandany ny valo taona farany nanandrana namorona rafitra mifehy miasa. Kanada dia somary nanaraka ny maodelin'i UK, fa toy ny any Amerika, malalaka ny faritany iadidian'izy ireo manokana izay mifanohitra amin'ny tanjon'ny governemanta federaly.
Misy firenena maherin'ny 40 izay manana karazana fandraràna ny vaping - na ny fampiasana, ny varotra na ny fanafarana, na ny fitambarana. Ny sasany dia manana fandrarana tanteraka izay manome lalàna ny vaping, ao anatin'izany ny fandrarana ny varotra sy ny fananana. Ny fandrarana dia mahazatra indrindra any Azia, Moyen Orient, ary Amerika atsimo, na dia an'i Aostralia aza ny fandrarana nikotinina malaza indrindra. Misafotofoto ny firenena sasany. Ohatra, ara-dalàna ny famafazana any Japon ary amidy ny vokatra, afa-tsy ny e-ranon-javatra misy nikôtinina, izay tsy ara-dalàna. Fa ny vokatra sigara tsy mandoro hafanana toy ny IQOS dia ara-dalàna sy be mpampiasa.
Sarotra ny manara-maso ny fiovana rehetra amin'ny lalàna mifehy. Ny notadiavinay teto dia ny fandehanana any amin'ireo firenena manana fandrarana na fameperana lehibe amin'ny vokatra vaping na etona. Misy fanazavana fohy. Tsy natao ho torolàlana momba ny dia na toro-hevitra momba ny vaping sy ny sidina izany. Raha mitsidika firenena tsy fantatra ianao dia tokony hanamarina loharano azo antoka sy azo antoka toy ny masoivohon'ny firenenao, na ny biraon'ny fizahan-tany any amin'ny firenena izay tsidihinao.
Fa maninona ny firenena no mandrara ny fisintomana?
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) sy ny fifehezany ny paraky dia manamboatra ny Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) - fifanarahana manerantany nosoniavin'ny firenena maherin'ny 180 - dia namporisika ny famerana sy ny fandrarana ny sigara e-sigara hatramin'ny nanombohan'ny vokatra voalohany tany Eoropeana sy Nijanona i Etazonia tamin'ny taona 2007. Ny OMS dia fitaomana mahery vaika (ary matetika no mahery indrindra) amin'ny politika momba ny fahasalamana sy ny fifohana sigara any amin'ny firenena maro - indrindra any amin'ny firenena mahantra, izay ividianan'ny OMS programa momba ny fahasalamana.
Ny FCTC mihitsy dia tarihin'ny mpanolotsaina avy amin'ireo fikambanana tsy miankina amerikana miady amin'ny sigara toy ny Campaign for Tobako-Free Kids - na dia tsy antoko ao amin'ny fifanarahana aza i Etazonia. Satria ireo vondrona ireo dia niady tamin'ny nify sy ny hoho tamin'ny vaping sy ireo vokatra fampihenana ny paraky sigara hafa, ny FCTC no naka ny toerany, miaraka amin'ny vokatra mahatsiravina ho an'ireo mpifoka any amin'ny firenena maro. Ny FCTC dia nanoro hevitra ireo mpikambana ao aminy (ny ankamaroan'ny firenena) mba handrara na hifehezana mafy ny e-sigara, na eo aza ny antontan-taratasy momba ny fifanarahana izay manisy lisitra ny fihenan'ny zava-mahadomelina ho paikady fanaraha-maso ilaina amin'ny fifehezana ny paraky.
Ny ankamaroan'ny firenena dia miankina amin'ny varotra sigara, ary indrindra ny fivarotana sigara, hahazoana fidiram-bola. Amin'ny tranga sasany, ny mpitondra fanjakana dia manao ny marina amin'ny safidiny handrarana na hamepetra ireo vokatra miangona mba hitehirizana ny fidiram-paraky. Matetika ny governemanta dia misafidy ny hampiditra vape ao amin'ny lalàna mifehy ny vokatra paraky, izay manamora kokoa ny fametrahana hetra amin'ny mpanjifa. Ohatra, rehefa nampandoavan'i Indonezia hetra 57 isan-jato amin'ny sigara e, ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny minisiteran'ny fitantanam-bola dia nanazava fa ny tanjon'ny hetra dia ny “hamehezana ny fanjifana ny zavona.”
Ny vaping ampahibemaso any amin'ny ankamaroan'ny firenena dia ferana toy ny sigara mifoka, sahala amin'ny any Etazonia. Raha manontany tena ianao raha afaka manao vape imasom-bahoaka, dia mazàna ianao mahita vape na mpifoka hafa ary manontany (na fihetsika) inona ireo lalàna ireo. Rehefa misalasala dia aza atao fotsiny. Raha tsy ara-dalàna ny vaping dia aleo antoka fa tsy hampiharina ny lalàna alohan'ny hanombohana ny fisavorovoroana.
Aiza no voarara na voafetra ny vokatra etona?
Ny lisitray dia be dia be, fa angamba tsy voafaritra. Miova tsy tapaka ny lalàna, ary na dia mihatsara aza ny fifandraisana eo amin'ireo fikambanana mpiaro, dia mbola tsy misy toerana fitehirizam-baovao momba ny lalàna miovaova erak'izao tontolo izao.Ny lisitray dia avy amina loharano mitambatra: ny tatitra Global State of Tobacco Harm Reduction avy amin'ny fikambanana mpanentana ny fampihenana ny fahasimbana britanika fahalalana-Action-Change, fampielezan-kevitra ho an'ny tranonkalan'ny lalàna mifehy ny fifohana sigara momba ny paraky sy ny paraky ary ny tranokala fanaraha-maso sigara manerantany noforonin'i Johns Mpikaroka ao amin'ny Oniversite Hopkins. Ny satan'ny ambanivohitra sasanys dia voafaritry ny fikarohana tany am-boalohany.
Ny sasany amin'ireo firenena ireo dia mandrara tanteraka ny fampiasana sy ny varotra, ny ankamaroany dia mandrara ny varotra fotsiny, ary ny sasany kosa mandrara ny vokatra misy nikôtinina na misy nikôtinina fotsiny. Any amin'ny firenena maro, dia tsy raharahiana ireo lalàna. Amin'ny hafa, ampiharina izy ireo. Avereno jerena miaraka amin'ny loharano azo antoka alohan'ny handehanana any amin'ny firenena misy vaping gear sy e-fluid. Raha tsy tanisaina ny firenena, avela na voafehy ny vaping, na tsy misy lalàna manokana mifehy ny e-sigara (hatramin'izao).
Miarahaba vaovao vaovao izahay. Raha fantatrao ny lalàna iray izay niova, na fitsipika vaovao misy fiatraikany amin'ny lisitray, azafady mba manaova hevitra ary hanavao ny lisitra izahay.
Ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny fivarotana
Tsy ara-dalàna ny fivarotana, afa-tsy ny vokatra ara-pitsaboana nankatoavina
Ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny manafatra na mivarotra. Tamin'ny Febroary 2020, namoaka didim-panjakana mandràra ny fanafarana ny vokatra vaping rehetra, anisan'izany ny vokatra zero-nikotinina, ny filoha meksikana. Na izany aza, mbola misy vondrom-piompiana mandroso any amin'ny firenena, ary ny fitarihana mpiaro ny vondrona mpanjifa Pro-Vapeo Mexico. Tsy mbola fantatra raha hanandrana haka ny vokatra entin'ny mpitsidika eto amin'ny firenena ny governemanta
Mino tsy ara-dalàna hampiasaina, tsy ara-dalàna ny fivarotana nikôtinina
Ara-dalàna ampiasaina, ara-dalàna ny mivarotra - fa ny fivarotana vokatra novokarina aorian'ny 8 Aogositra 2016 dia voarara tsy misy kaomandy marketing avy amin'ny FDA. Tsy mbola nisy orinasa vaping nangataka fangatahana marketing. Amin'ny 9 septambra 2020, ny vokatra talohan'ny 2016 izay tsy natolotra ho fankatoavana ny marketing dia tsy ara-dalàna ny mivarotra
Ara-dalàna ampiasaina, mino tsy ara-dalàna ny mivarotra, afa-tsy ny vokatra ara-pitsaboana nankatoavina
Mino ara-dalàna hampiasaina, tsy ara-dalàna ny mivarotra - fa ny toerana misy kosa tsy azo antoka
Mino tsy ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny fivarotana
Ara-dalàna ampiasaina, inoana tsy ara-dalàna ny fivarotana
Ara-dalàna ny fampiasana, tsy ara-dalàna ny fivarotana - na izany aza, nanambara ny firenena tamin'ny taona 2019 ny fikasan'izy ireo hanangana ara-dalàna sy hifehezana ireo e-sigara
Tsy manana lalàna na lalàna mifehy ny vaping i Bangladesh amin'izao fotoana izao. Na izany aza, tamin'ny Desambra 2019 dia nilaza ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny minisiteran'ny fahasalamana amin'ny Reuters fa ny governemanta dia "miasa am-pahavitrihana amin'ny fandrarana ny famokarana, ny fanafarana sy ny fivarotana sigara e-sigara ary ny tobiko rehetra miovaova mba hisorohana ny loza ara-pahasalamana."
Ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny fivarotana ny ankamaroan'ny vokatra
Voarara: tsy ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny fivarotana
Inoana fa voarara
Tamin'ny volana septambra 2019, noraran'ny governemanta foibe Indiana ny fivarotana vokatra vaping mivantana. Fantatry ny governemanta tsara fa ny Indianina 100 tapitrisa mifoka ary mamono olona efa ho iray tapitrisa isan-taona ny paraky dia tsy nanao hetsika hampihenana ny fahazoana sigara. Tsy kisendrasendra dia manana ny 30 isan-jaton'ny orinasa paraky lehibe indrindra ao amin'ny firenena ny governemanta Indiana
Ara-dalàna ampiasaina, ara-dalàna ny hivarotana fitaovana, tsy ara-dalàna ny mivarotra ranon-javatra misy nikôtinina (na dia misy olona afaka manafatra vokatra misy nikôtinina miaraka amina fetra sasany aza). Ara-dalàna ny vokatra sigara mafana (HTPS) toy ny IQOS
Ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny fivarotana vokatra misy nikôtinina. Na dia tsy ara-dalàna aza ny varotra ataon'ny mpanjifa vokatra misy nikôtinina dia manana tsenam-barotra miroborobo i Malaysia. Notafihin'ny manam-pahefana indraindray ny mpivarotra sy ny entana nogiazany. Voarara tanteraka ny fivarotana ny vokatra vaping rehetra (na dia tsy misy nikôtinina aza) any amin'ny fanjakan'ny Johor, Kedah, Kelantan, Penang ary Terengganu.
Inoana fa voarara, miorina amin'ny lahatsoratra aogositra 2020
Ara-dalàna ampiasaina (voarara ampahibemaso), tsy ara-dalàna ny fivarotana
Voarara: tsy ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny fivarotana. Hatramin'ny tamin'ny taon-dasa, ny fananana dia heloka bevava ihany koa, saziana hatramin'ny 1,500 $ (US)
Mino ara-dalàna hampiasaina, tsy ara-dalàna ny mivarotra. Thailand dia nahazo laza tamin'ny fanamafisana ny fandraràny ny fanafarana entana sy ny varotra vokatra misy zava-nitranga marobe tato ho ato, anisan'izany ny fanagadrana ireo mpizahatany vap "noho ny fanafarana". Voalaza fa mandinika indray ny lalàna mifehy ny e-sigara mafy ny governemanta
Mino ara-dalàna hampiasaina, tsy ara-dalàna ny mivarotra
Ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny manafatra na mivarotra. Tsy ara-dalàna any Torkia ny fivarotana sy ny fanafarana ny vokatra vaping, ary rehefa nanamafy ny fandrarana azy ny firenena tamin'ny taona 2017, dia namoaka fanambarana an-gazety ny WHO izay nankasitraka ny fanapaha-kevitra. Saingy mifanipaka ny lalàna, ary misy ny tsenan'ny vaping sy ny vondron'olona miolakolaka ao Torkia
Ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny fivarotana nikôtinina. Any Aostralia, ny fananana na fivarotana nikôtinina dia tsy ara-dalàna raha tsy misy diabeta alohan'ny dokotera, fa afa-tsy amin'ny fanjakana iray (Australia Andrefana) dia ara-dalàna ny mivarotra fitaovam-pako. Noho izany antony izany dia misy tsena mivoatra miroborobo na eo aza ny lalàna. Ny sazy noho ny fananana dia miovaova araky ny fanjakana iray mankany amin'ny manaraka, saingy mety ho mafy dia mafy
Ara-dalàna ampiasaina, tsy ara-dalàna ny mivarotra - na dia toa eo am-pelatanan'ny lalàna mifehy vaping aza ny firenena
Mitandrema ary manaova fikarohana!
Averina indray, raha mitsidika firenena iray izay tsy azonao antoka ianao, azafady mba jereo miaraka amin'ireo loharanom-baovao ao amin'io firenena io momba ny lalàna sy izay mety zakan'ny manam-pahefana. Raha mankany amin'ny firenena iray izay tsy ara-dalàna ny fisotroana vape ianao - indrindra any amin'ny firenena Afovoany Atsinanana - eritrereto indroa ny fahatapahan-kevitry ny vape, satria mety hiatrika voka-dratsy ianao. Ny ankamaroan'izao tontolo izao dia mandray ny zavona amin'izao fotoana izao, fa ny drafitra sy ny fikarohana sasany dia mety hitazona ny dia mahafinaritra anao tsy hivadika nofy ratsy.
"VIP Pass" varotra eran-tany voalohany ...
Manana "tsiambaratelon'ny tsiro lehibe ...
FEELM Mamiratra amin'ny Vap lehibe indrindra manerantany ...
Lisitra SMOORE ao amin'ny Hong Kong Stock Exchange
Tsiambaratelo miafina an'ny FEELM Atomization Techn ...
Steven Yang: Dingana iray ho ahy, iray goavambe L ...
Dingana valo hiadiana amin'ny COVID-19, ny FEELM dia ...
FEELM Nandresy iF Design Award 2020 fanavaozana ...
E Kitapo Blitter sigara, E sigara etona ranoka, Solony mifoka, Newport E sigara, Sigara hafanana, Epen,